FIRY ISAN-JATON’NY MALAGASY NO SAMBATRA ? – Blaogin'i Voniary
Any Bhoutan, 55% ny mponina no mahatsapa fa tena sambatra ary 11% monja no mahatsiaro mijaly araka ny antontan’isa tamin’ny 2010. Any amin’io firenena io manko ny FAHASAMBARANA FAOBE (Bonheur National Brut) no andrefesany ny fandrosoana fa tsy ny harin-karena faobe. Io no entiny mamaritra ny politikam-pandrosoana rehetra ary hita fa mahomby hatramin’izao. Aiza ho aiza isika Malagasy ?
NY MOMBAMOMBA AN’I BHOUTAN
Bhoutan dia firenena kely iray voatery eo anelanelan’ny goavana anankiroa dia Inde sy Chine. Sahabo eo amin’ny 38 394 km² ny refiny ary ahitana mponina 700 000. Tamin’ny 17 desambra 2005 no nanambaran’ny mpanjaka fahaefatra, Jigme Singye Wangchuck, tamin’ny fomba ofisialy ny firosoan’ny firenena amin’ny demokrasia parlementera. Izany dia ho fanohizana ny fiovana efa nomanina taona maro tany aloha ialana amin’ny fitondram-panjaka ranofotsiny ho amin’ny fitondram-panjaka homban-dalampanorenana. Araka izany, ny mpanjaka ihany no mpitondra ny tany sy ny firenena saingy manam-pahefana hanesotra azy amin’ny toerany amin’ny alalan’ny fifidianana ny solombavambahoaka sy ny loholona. Ny taona 2006, nametra-pialana sy namindra ny fitondrana tamin-janany lahimatoa, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, ny mpanjaka fahaefatra. Tamin’ny 2007 dia notanterahina ny fifidianana demokratika voalohany teo amin’ny tantaran’i Bouthan ary Jigme Thinley no lany ho praiminisitra.
FAHASAMBARANA FAOBE HOE ?
Tany amin’ny taona 70 tany ny mpanjaka fahaefatra, izay vao herotrorony, no namorona io hevitra io. Nitety ny fireneny izy ary nanadihady ny olona isan-tsokajiny ny amin’izay faniriany lalina amin’ny fiainana. Ny ankabeazan’ny mponina dia namaly fa ny ho sambatra no antom-pisiany. Naka hevitra tamin’ny mpanolotsainy àry ny mpanjaka ny amin’izay fomba mahomby mba ahasambatra ny vahoaka. Noezahina ny tsy anarahana ny lalan’ireo firenena maro eran-tany izay nanary ny soatoaviny, ny fiandrianam-pireneny ary nanimba ny harena voajanahary tao aminy mba hampitomboana ny harin-karena. Izany no niavian’ny hevitra handrefesana ny fandrosoan’i Bouthan amin’ny alalan’ny FAHASAMBARANA FAOBE. Voafaoka ao anatin’io ny fanajana ny soatoavina, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fandrosoana lovainjafy, ny fifampitsimbinana sy ny maro hafa. Ny fitondrana rehetra izay nisesy dia nikatsaka hatrany ny hampitomboana ny tahan’io fahasambarana faobe io. Ankehitriny dia mahatsapa ho voakasika sy mandray andraikitra amin’iny fanatrarana ny tanjom-pahasambarana avokoa ny singan’olona tsirairay, eny na hatramin’ny madinika indrindra aza.
TSY NOFINOFY FOTSINY
Amin’ny mponina ao Bhoutan, tsy misavoana eny an-danitra izany fahasambarana izany fa iainana isan’andro. Raha nanontaniana ny tantsaha iray ny amin’ny fahafantarany ilay FAHASAMBARANA FAOBE dia hoy izy : « amiko, ny fahafahako manampy ny hafa amin’izay ananako ary ny fanampian’ny hafa ahy amin’izay ananany no atao hoe fahasambarana ». Miainga avy any amin’ny fanjakana foibe ny fanapariahana io foto-kevitra io, izay nampidirina tao anaty lalampanorenana mihitsy tamin’ny 2008. Ny Politika fototra, izay mizarazara ho programa ary tsinjaraina ho tetikasa, no entina manatanteraka azy. Anisan’izany ny fandrarana ny dokam-barotra amin’ny fomba rehetra mba hiarovana ny kolontsaina sy ny tontolo iainana. Eny amin’ny birao sy tranom-panjakana rehetra dia tsy maintsy misalotra fitafy nentim-paharazana na iza na iza. Na ny fandrafetana trano aza dia mila manaraka ny fenitra nentin-drazana. Fa ny laharam-pahamehana indrindra dia ny fanabeazana. Hatramin’ny fahakeliny ny ankizy dia efa ampahafantarina ny tanjon’ny firenena ary ampianarina hitondra fiovana. Ny tanora moa tsy diso anjara amin’ny fampiofanana manokana amin’ny fampiharana io foto-kevitra ijoroan’ny firenena io.
Hoy ny praiminisitra Jigme Thinley: « Tsy te haka tahaka be fahatany izay ataon’ny tandrefana izahay. » Mahalaza ny lalana arahin’i Bhoutan ary ny finiavan’ny mpitondra sy ny mponina ao aminy izany. Ny ahafahana mandroso dia miankina indrindra amin’ny fahafantarana izay kasaina haleha. Aiza ary no tiantsika Malagasy ahatongavana ?
Fanagasiana, fandrosoana, fitiavan-tanindrazana, Politique économique Malagasy, toe-karena malagasy, tompon'andraikitra